Single မိန်းကလေးတွေအတွက် RS အကြံပေးချက် ၇ ချက် - Askstyle
စုံတွဲတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ single မိန်းကလေး တယောက်ဖြစ်ရတာဟာ တကယ်တော့ စိတ်ထဲ ကသိကအောက် ဖြစ်စရာကောင်းလှပါတယ်။ တခါတရံမှာ “ငါများ ကံမကောင်းလို့ ဘယ်သူမှမကြိုက်တာလား” လို့တောင် တွေးထင်မိစရာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ကြည့်လိုက်တော့လဲ ကိုယ်ဟာ အပြစ်အနာဆာလဲ မရှိ။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ဒီ အကြံပေးချက်လေးတွေအတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်လို့ မမှားဘူးနော်..။
Sis တို့ single ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူငယ်ချင်း ကာပယ်တွေက ကြည်နူးနေတာမြင်ရတဲ့အခါ “ဘာကြောင့်များ ငါနဲ့ သင့်တော်တဲ့သူတယောက်ကို ရှာဖို့ မလုပ်မိတာပါလိမ့်” လို့ တခါတရံမှာ တွေးနေမိတတ်ပါတယ်။ အများကြီး မတွေးပဲနဲ့ ကိုယ့်ကို တွဲဖို့ လာပြောတဲ့သူရှိရင် အရမ်းကြီး မဝေဖန်ပစ်ပဲ ၊ အရွေးလွန်မနေပဲ သူနဲ့ တခါလောက် ချိန်းတွေ့ကြည့်လိုက်သင့်ပါတယ်။ စိတ်ကို လွတ်လပ်အောင်ထားပါ။ နောက် ပိုပြီးအရေးကြီးတာက ဘာမဟုတ်တဲ့ အသေးလေးတွေကအစ လိုက်ပြီး မစီစစ်နေပါနဲ့။ ဒါ အပျိုကြီးအကျင့်တွေပါ။ ဒီအတိုင်း ရိုးရိုးလေးနဲ့ ပထမ လေး ငါး ပတ်လောက်ကို တွဲကြည့်လိုက်ပါ။
၂။ သူ့ကို ထိန်းချုပ်ခွင့်လေး အနည်းငယ်ပေးလိုက်ပါ
အခုလို့ ကိုယ့်နဲ့ စတွဲနေတဲ့ ကောင်လေးကို ထိန်းချုပ်ခွင့် အနည်းငယ်ပေးလိုက်ခြင်းဟာ ဘာမှ မကြီးကျယ်လွန်းလှပါဘူး။ ယောက်ျားတယောက်အတွက်တော့ Sis တို့ကို ဂရုတစိုက်နဲ့ လိုက်ပြီး ကြည့်ရှုပေးနေရတာကိုက သူတို့ကို ယောက်ျားဆန်ခွင့်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ သူ့ကို သင့်အပေါ် ချစ်လာစေချင်ရင် ထိန်းချုပ်ခွင့်အနည်းငယ်ပေးလိုက်ပါ။ သင့်အနားမှာလာနေတဲ့အခါ သူ့ကိုသူ အသုံးမကျဖြစ်စေမယ့် ခံစားမှုမျိုးကို မပေးပါနဲ့။
ဒီ တယောက်နဲ့ တွဲနေပြီးတော့ အရင်က တယောက်နဲ့ တွဲသလို RS မျိုးကို တပုံစံထဲ မဖန်တီးချင်ပါနဲ့။ ဒါဟာ သူ့ကို စော်ကားလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ အကယ်လို့ အရင်ရည်းစားဟောင်းနဲ့ တပုံစံထဲတူတဲ့ သူကို ရှာနေမယ်ဆိုရင် အရင်ရည်းစားဟောင်းလို အချိုးမျိုးနဲ့ပဲ Sis တို့ ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေအစား အခုတွဲနေတဲ့သူဆီမှာ Sis တို့ စိတ်ကူးထဲက ယောက်ျားရဲ့ အရည်ချင်းလေးတွေရှိနေမလား ရှာကြည့်လိုက်ပါ။
၄။ စိတ်ထင်ရာတွေနဲ့ ဒရမ်မာမချိုးပါနဲ့
ဘယ်တော့မှ စိတ်ထင်ရာတွေနဲ့ လိုက်မစွပ်ဆွဲလိုက်ပါနဲ့ ၊ ဒရမ်မာချိုးတွေ အရမ်းမချိုးပါနဲ့။ အဲ့လိုလုပ်တာဟာ သူ့ကို အာရုံတွေ အသားကုန်နောက်စေပြီး နောက်ဆုံး Sis တို့ကို ထားသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေအစား သိချင်တာကို တည့်တည့်သာမေးပါ။ ဘယ်လိုခံစားနေရသလဲကို တည့်တည့်သာပြောပါ။ (အမှန်တိုင်းဝန်ခံပါ့မယ် ၊ ယောက်ျားအများစုဟာ မိန်းကလေးစိတ်နဲ့ ပတ်သတ်ရင် ခပ်တုံးတုံးခပ်အအ တွေက များပါတယ်။ ဒီတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် တည့်တည့်သာပြောပါ။)
ဒါမျိုးဘယ်တော့မှ မလုပ်ပါနဲ့။ အကြောင်းက ယောကျာ်းလေးတွေက သူတို့ သဘောကျတဲ့ကောင်မလေးကို အလိုလိုက်ပေးရတာ စိတ်ချမ်းသာတတ်ကြပါတယ်။ ကြည်လဲကြည်နူးကြပါတယ်။ ကိုယ့်တဖက်ထဲပဲ ကြည့်ပြီး အသားလွတ်ကြီး အလိုလိုက်ခံချင်နေတာမျိုးကိုတော့ ဘယ်ယောက်ျားလေးမှ မခံချင်ပါဘူး။ အဲ့လို ယောက်ျားကို မျှော်နေရင်တော့ Sis ရေ သီလရှင်သာ ၀တ်လိုက်ပါ။
၆။ အတက်အကျ အနိမ့်အမြင့်ကို လက်ခံပါ
မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘ၀မှာ စစ်မှန်တဲ့ မင်းသားလေးနဲ့ မတွေ့ရခင် ဖားပြုတ်ကြီးတွေကို မင်းသားအမှတ်နဲ့ နမ်းရှိုက်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ဒါဟာ အမှန်တရားပါ။ အဲ့ ဖားပြုပ်တွေကို နမ်းခဲ့ရလို့ ယောက်ျားတွေအပေါ် အမြင်စောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေလှပါဘူး။ Sis တို့စိတ်ကူးထားသလို ကိုယ်နဲ့တွဲတဲ့ ကောင်လေးတိုင်းဟာ ဒစ်စနေ ကာတွန်း မင်းသားလေးတွေလို ဖြစ်မယ်လို့ တွေးထင်နေရင်တော့ Sis တို့ ရည်းစားမရှာသင့်ပါဘူး။ စိတ်ကျန်းမာရေး ဆရာဝန်ရှာဖို့ လိုနေပါပြီ။
အတတ်နိုင်ဆုံး လက်တွေ့ကျပါစေ ။ တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲ အကောင်းမြင်တတ်ပါစေ။ အရင်က မကောင်းခဲ့တဲ့ Ex တွေနဲ့ အတွေ့အကြုံ တွေကို မကောင်းတဲ့ သင်ခန်းစာလို့မှတ်ပြီး ရှေ့ဆက်ပါလို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်။
၇။ ကိုယ့်ရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကို အတုမလုပ်ပါနဲ့
ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံကို အတုလုပ်ပြီး ကောင်လေး တယောက်ကိုချဉ်းကပ်တာက အစပိုင်းတော့ အဆင်ပြေစေလိ့မ်မှာဖြစ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေလာမှမဟုတ်ပါဘူး။ တဦးနဲ့ တဦးပုံစံမတူတဲ့အခါ ဘယ်လောက်ပဲ အချစ်လို့ နာမည်တပ်တပ် ရှေ့ဆက်လို့ မရတော့တာတွေ အများကြီးပါ။ ဒီတော့ Sis တို့ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ ဟန်မဆောင်ပါနဲ့။
Single မမတွေကို mention လိုက်ဦးနော်..
စုံတှဲတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနတေဲ့ လောကကွီးထဲမှာ single မိနျးကလေး တယောကျဖွဈရတာဟာ တကယျတော့ စိတျထဲ ကသိကအောကျ ဖွဈစရာကောငျးလှပါတယျ။ တခါတရံမှာ “ငါမြား ကံမကောငျးလို့ ဘယျသူမှမကွိုကျတာလား” လို့တောငျ တှေးထငျမိစရာပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ပွနျကွညျ့လိုကျတော့လဲ ကိုယျဟာ အပွဈအနာဆာလဲ မရှိ။ ဒီလိုဆိုရငျတော့ ဒီ အကွံပေးခကျြလေးတှအေတိုငျး လိုကျလုပျကွညျ့လို့ မမှားဘူးနျော..။
Sis တို့ single ဖွဈနတေဲ့ အခြိနျမှာ သူငယျခငျြး ကာပယျတှကေ ကွညျနူးနတောမွငျရတဲ့အခါ “ဘာကွောငျ့မြား ငါနဲ့ သငျ့တျောတဲ့သူတယောကျကို ရှာဖို့ မလုပျမိတာပါလိမျ့” လို့ တခါတရံမှာ တှေးနမေိတတျပါတယျ။ အမြားကွီး မတှေးပဲနဲ့ ကိုယျ့ကို တှဲဖို့ လာပွောတဲ့သူရှိရငျ အရမျးကွီး မဝဖေနျပဈပဲ ၊ အရှေးလှနျမနပေဲ သူနဲ့ တခါလောကျ ခြိနျးတှကွေ့ညျ့လိုကျသငျ့ပါတယျ။ စိတျကို လှတျလပျအောငျထားပါ။ နောကျ ပိုပွီးအရေးကွီးတာက ဘာမဟုတျတဲ့ အသေးလေးတှကေအစ လိုကျပွီး မစီစဈနပေါနဲ့။ ဒါ အပြိုကွီးအကငျြ့တှပေါ။ ဒီအတိုငျး ရိုးရိုးလေးနဲ့ ပထမ လေး ငါး ပတျလောကျကို တှဲကွညျ့လိုကျပါ။
၂။ သူ့ကို ထိနျးခြုပျခှငျ့လေး အနညျးငယျပေးလိုကျပါ
အခုလို့ ကိုယျ့နဲ့ စတှဲနတေဲ့ ကောငျလေးကို ထိနျးခြုပျခှငျ့ အနညျးငယျပေးလိုကျခွငျးဟာ ဘာမှ မကွီးကယျြလှနျးလှပါဘူး။ ယောကျြားတယောကျအတှကျတော့ Sis တို့ကို ဂရုတစိုကျနဲ့ လိုကျပွီး ကွညျ့ရှုပေးနရေတာကိုက သူတို့ကို ယောကျြားဆနျခှငျ့ပေးလိုကျတာပါပဲ။ သူ့ကို သငျ့အပျေါ ခဈြလာစခေငျြရငျ ထိနျးခြုပျခှငျ့အနညျးငယျပေးလိုကျပါ။ သငျ့အနားမှာလာနတေဲ့အခါ သူ့ကိုသူ အသုံးမကဖြွဈစမေယျ့ ခံစားမှုမြိုးကို မပေးပါနဲ့။
ဒီ တယောကျနဲ့ တှဲနပွေီးတော့ အရငျက တယောကျနဲ့ တှဲသလို RS မြိုးကို တပုံစံထဲ မဖနျတီးခငျြပါနဲ့။ ဒါဟာ သူ့ကို စျောကားလိုကျတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ အကယျလို့ အရငျရညျးစားဟောငျးနဲ့ တပုံစံထဲတူတဲ့ သူကို ရှာနမေယျဆိုရငျ အရငျရညျးစားဟောငျးလို အခြိုးမြိုးနဲ့ပဲ Sis တို့ ကွုံတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ဒါတှအေစား အခုတှဲနတေဲ့သူဆီမှာ Sis တို့ စိတျကူးထဲက ယောကျြားရဲ့ အရညျခငျြးလေးတှရှေိနမေလား ရှာကွညျ့လိုကျပါ။
၄။ စိတျထငျရာတှနေဲ့ ဒရမျမာမခြိုးပါနဲ့
ဘယျတော့မှ စိတျထငျရာတှနေဲ့ လိုကျမစှပျဆှဲလိုကျပါနဲ့ ၊ ဒရမျမာခြိုးတှေ အရမျးမခြိုးပါနဲ့။ အဲ့လိုလုပျတာဟာ သူ့ကို အာရုံတှေ အသားကုနျနောကျစပွေီး နောကျဆုံး Sis တို့ကို ထားသှားပါလိမျ့မယျ။ ဒါတှအေစား သိခငျြတာကို တညျ့တညျ့သာမေးပါ။ ဘယျလိုခံစားနရေသလဲကို တညျ့တညျ့သာပွောပါ။ (အမှနျတိုငျးဝနျခံပါ့မယျ ၊ ယောကျြားအမြားစုဟာ မိနျးကလေးစိတျနဲ့ ပတျသတျရငျ ခပျတုံးတုံးခပျအအ တှကေ မြားပါတယျ။ ဒီတော့ ဖွဈနိုငျရငျ တညျ့တညျ့သာပွောပါ။)
ဒါမြိုးဘယျတော့မှ မလုပျပါနဲ့။ အကွောငျးက ယောကျြားလေးတှကေ သူတို့ သဘောကတြဲ့ကောငျမလေးကို အလိုလိုကျပေးရတာ စိတျခမျြးသာတတျကွပါတယျ။ ကွညျလဲကွညျနူးကွပါတယျ။ ကိုယျ့တဖကျထဲပဲ ကွညျ့ပွီး အသားလှတျကွီး အလိုလိုကျခံခငျြနတောမြိုးကိုတော့ ဘယျယောကျြားလေးမှ မခံခငျြပါဘူး။ အဲ့လို ယောကျြားကို မြှျောနရေငျတော့ Sis ရေ သီလရှငျသာ ဝတျလိုကျပါ။
၆။ အတကျအကြ အနိမျ့အမွငျ့ကို လကျခံပါ
မိနျးကလေးတှရေဲ့ ဘဝမှာ စဈမှနျတဲ့ မငျးသားလေးနဲ့ မတှရေ့ခငျ ဖားပွုတျကွီးတှကေို မငျးသားအမှတျနဲ့ နမျးရှိုကျခဲ့ကွဖူးပါတယျ။ ဒါဟာ အမှနျတရားပါ။ အဲ့ ဖားပွုပျတှကေို နမျးခဲ့ရလို့ ယောကျြားတှအေပျေါ အမွငျစောငျးနမေယျဆိုရငျတော့ အဆငျမပွလှေပါဘူး။ Sis တို့စိတျကူးထားသလို ကိုယျနဲ့တှဲတဲ့ ကောငျလေးတိုငျးဟာ ဒဈစနေ ကာတှနျး မငျးသားလေးတှလေို ဖွဈမယျလို့ တှေးထငျနရေငျတော့ Sis တို့ ရညျးစားမရှာသငျ့ပါဘူး။ စိတျကနျြးမာရေး ဆရာဝနျရှာဖို့ လိုနပေါပွီ။
အတတျနိုငျဆုံး လကျတှကေ့ပြါစေ ။ တပွိုငျနကျထဲမှာပဲ အကောငျးမွငျတတျပါစေ။ အရငျက မကောငျးခဲ့တဲ့ Ex တှနေဲ့ အတှအေ့ကွုံ တှကေို မကောငျးတဲ့ သငျခနျးစာလို့မှတျပွီး ရှဆေ့ကျပါလို့ပဲ ဆိုခငျြပါတယျ။
၇။ ကိုယျ့ရဲ့ နထေိုငျမှုပုံစံကို အတုမလုပျပါနဲ့
ကိုယျ့ရဲ့ ဘဝနထေိုငျမှုပုံစံကို အတုလုပျပွီး ကောငျလေး တယောကျကိုခဉျြးကပျတာက အစပိုငျးတော့ အဆငျပွစေလေိ့မျမှာဖွဈပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ ဘယျလိုမှ အဆငျပွလောမှမဟုတျပါဘူး။ တဦးနဲ့ တဦးပုံစံမတူတဲ့အခါ ဘယျလောကျပဲ အခဈြလို့ နာမညျတပျတပျ ရှဆေ့ကျလို့ မရတော့တာတှေ အမြားကွီးပါ။ ဒီတော့ Sis တို့ ဖွဈနိုငျမယျဆိုရငျ ဘယျတော့မှ ဟနျမဆောငျပါနဲ့။
Single မမတှကေို mention လိုကျဦးနျော..
လူငယျတို့အတှကျ လူငယျမီဒီယာ (lunge.media)
သငျဟာလူငယျတဈယောကျဆိုရငျ Lunge.media လူငယျမီဒီယာ page ကို Like လုပျထားလိုကျပါ။ သငျ့အတှကျ ရသဖွဈစမေယျ့ ဆောငျးပါးတှကေို နစေ့ဉျတငျဆကျပေးသှားမှာပါ။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ💖 💘 …
ပြီးပြည့်စုံတဲ့မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ💖 💘 ... ပြီးပြည့်စုံတဲ့မိန်းကလေးတွေက ပေါပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေကသာ ဘယ်လိုမိန်းကလေးကို ရှာရမယ်မှန်းမသိကြတာ။ ကိုယ်ဘေးမှာ ဒီလိုမိန်းကလေးတွေရှိနေရင်လည်း လက်မလွတ်တန်းချစ်ရအောင် သူတို့အရည်ချင်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်မယ်နော်။ ၁)…
ချစ်သူ မဖြစ်ခင် ကာလ …. ချစ်သူဖြစ်ပြီး ကာလ💖 💘 …
ချစ်သူ မဖြစ်ခင် ကာလ …. ချစ်သူဖြစ်ပြီး ကာလ💖 💘 ... တကယ်တော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်နေတယ် ဆိုတာ သိနေကြတဲ့ အချိန်က…
ဘယ်တော့မှ မဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းခလေး ရဲ့လက္ခဏာ ( ၅ ) ခု... မိန်းကလေး တစ်ယောက်က သင့်ကို တကယ်ချစ်မိသွားပြီဆိုရင် သစ္စာ ဆိုတာ သင်မတောင်းလည်း…
ဟင်းရွက်တို့ရဲ့ ဘုရင်မလို့ တင်စားတတ်ကြတဲ့ ကိုက်လန်၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ရင် အတိတ်ကိုမကြည့်နဲ့ အနာဂတ်ကိုပဲကြည့်
သူတို့အတွဲတွေ ဘာ့ကြောင့် ခဏခဏ ရန်ဖြစ်ကြရတာလဲ💖 💘 …
The Voice Myanmar ရဲ့ ပထမဆုံးအစီစဉ် ဘာတွေထူးခြားလဲ..?
အရာရာ ကို စွန့်လွှတ်ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ ခရီးထွက် ခဲ့တဲ့ စုံတွဲ ဘက်ဂျက် မလောက်လို့ အိမ်သာဆေးနေရ
ယမမင်းနှင့် စကားပြောခြင်း ( ပါရဂူ )…